I-China luminescent icebo lokuphuma ngomshini wokuphuthumayo ophuma endaweni kanye nabakhiqizi | I-Grand Luminous
Uhlelo lokufudusa umlilo oluphuthumayo lwe-luminescent luvame ukuphrinta ifilimu yenkampani yethu ekhanyayo, ipuleti ye-luminescent noma ipuleti yensimbi ekhanyayo, engaphrintwa ngokuya ngezidingo zangempela. Izinto zethu ezibonakalayo zinokukhanya okukhanyayo okuhle, okulula ukuphrinta, okungelula ukufiphala kanye nokuvutha amalangabi. Kunganikeza nomsebenzi wokubonisa ngaphandle kokuhlinzekwa kwamandla okuphuthumayo, okuluhlaza nokuvikelwa kwemvelo. Uhlelo lokufuduka ngokuphuthumayo ngomlilo (FEEP) lumbhalo obhaliwe noma owenziwe ...
Uhlelo lokuthuthwa komlilo oluphuthumayo (FEEP) luwumbhalo obhaliwe noma ohlanganiswe ohlanganisa isenzo okufanele senziwe yibo bonke abasebenzi lapho kwenzeka umlilo namalungiselelo okubiza i-fire brigade. Kungafaka noma yiluphi ulwazi olufanele ku-FEEP.
Isaziso Somlilo Esijwayelekile
Ezakhiweni ezincane noma ezindaweni osebenzela kuzo, lokhu kungathatha isimo sesibonakaliso esilula sezimpawu zomlilo noma izimpawu ezifakwe ezikhundleni lapho abasebenzi nabantu abahambisana nakho bengakuqonda futhi bajwayelane nokuqukethwe.
Isaziso Somlilo Sabasebenzi
Ubungozi bomlilo obukhulu noma izakhiwo ezinkulu noma ezinkulu zizodinga uhlelo oluthe xaxa lokufuduka oluphuthumayo oluthatha okutholakele ekuhlolweni noma ekuhlolweni kwengozi, isib. Abasebenzi abasengozini enkulu nezakhiwo zabo noma indawo. Futhi, izaziso ezinikeza imiyalo ecacile nenemfushane yenqubo okufanele uyilandele uma umlilo kufanele uboniswe kahle.
Kwezinye izimo, kufanele uphakamise abantu ukuthi basebenzise uhlelo lokusebenza ngomlilo futhi ubanikeze uqeqesho olwanele ezinqubekweni zokucima umlilo kanye nokuphuma endaweni. Izinto ezilandelayo kufanele zibheke lapho kufanele khona:
Isu lokususa umlilo
Isenzo sokuthola umlilo
Isenzo sokuzwa i-alamu yomlilo
Ibiza abacimi bomlilo
Ukuhlukaniswa kwamandla / kwenqubo
Ukukhonjwa kwemizila ebalulekile yokuphunyuka
Abalindi bomlilo / izimashi
Izindawo zokuhlangana nezingcingo
Kunikezwe imishini yokucisha umlilo
Uhlelo Lokuphuma Nezimo Eziphuthumayo
Ukuxhumana nezinsizakalo eziphuthumayo
Icebo noma isu lokufuduka ngomlilo
Udinga ukuthi uhlole ukuthi uzohlela kanjani ukufuduselwa kuleso sakhiwo ngenxa yokuhlolwa kwengozi noma ukuhlolwa kwakho nezinye izindlela zokuphepha ngomlilo onazo noma ocabanga ukuzibeka.
Ezakhiweni eziningi, ukuphuma lapho kwenzeka umlilo kuzobe kungukusebenzisa wonke umuntu ophendukela esenzakalweni sesexwayiso esinikezwe lapho kutholakala umlilo, bese enza indlela yawo, ebaleka, aye endaweni ephephile ngaphandle kwendawo leyo. Kuyaziwa njengokuphunyuka kanyekanye futhi ngokujwayelekile kuzoqala ngokukhala kwe-alamu ejwayelekile ngaphezulu kohlelo lokuqwashisa ngomlilo.
Ukuphuma Ngokuphambene Kwezigaba.
Kwezinye izakhiwo ezinkulu eziyinkimbinkimbi, amalungiselelo eziphuthumayo aklanyelwe ukuvumela abantu abangekho engcupheni yomlilo ukuba baqale kancane ukushiya noma ukuphuma kwabo.
Kungakuhle ukuqala ukuthutha kuqala ngokuphuma ngaphandle kwendawo eseduze nomlilo futhi uxwayise abanye abantu ukuthi bame. Lokhu kwenziwa ngokushiya ngokushesha phansi lapho kukhona khona umlilo nesitezi esingenhla.
Amanye amafulethi abese ekhishwa ngamunye ngamunye ukugwema ukuxinana ezindleleni zokuphunyuka. Abanye abantu bayasala uma kunesidingo sokwenza kanjalo. Uhlelo lokuxwayisa ngomlilo kufanele lukwazi ukunikeza amasiginali amabili ahlukile (ukuxwayisa kanye nokuphuma) noma unikeze imiyalezo efanele yezwi.
Isibhedlela sokuphuma endaweni efanelekile, kanye namakhaya anakekelayo angaphansi kwegumbi elithile angahlukani nomlilo futhi abahlali badluliselwe egumbini elingaphansi komlilo bayiswe egumbini eliseduze futhi uma kunesidingo futhi.
Ngokuya ngesikhundla somlilo noma isimo, ekugcineni kungahle kube kubalulekile ukucubungula ukuphuma okuqondile noma okuqondile. Ngenxa yesikhathi esengeziwe, lolu hlobo lokushiya noma lokuphuma luthatha, ezinye izinyathelo zokuphepha ngomlilo mhlawumbe zingadingeka noma zidingeka.
Lokhu kufaka phakathi:
Izinhlelo ze-alamu yezwi
Amaphoyinti wokulawula umlilo
Ukuhlanganiswa kwezakhiwo okusetshenziselwa ukwakha okwenqabela umlilo
Izikhuhli ezakhiweni lapho indawo ephezulu kakhulu ingamamitha angama-30 noma ngaphezulu ngaphezu kwenhlabathi
Kwezinye izimo, kungahle kungalungeli i-alamu ejwayelekile yokuqalisa ukuphuma ngokushesha. (Ama-cinema naweshashalazi) Lokhu kungaba lapho isibalo samalungu omphakathi atholakalayo noma akhona kanye nesidingo sabasebenzi noma sabasebenzi sokubeka amasu ahleliwe wokuphuma endaweni ephephile.
Ezimweni ezinjalo, i-alamu yabasebenzi inganikezwa (ngamarekhodi omlilo, iziqu zomuntu siqu, imisindo yokuqonda noma umusho onekhodi ohlelweni lwamakheli womphakathi njll.). Ukulandela i-alamu yabasebenzi, isinali ye-alamu ejwayelekile ingayinikeza, futhi kuqhamuke abanye noma abasebenzi baxoshwe ngokweqile. I-alamu ejwayelekile ingaqalwa ngokuzenzakalelayo uma ukuqalwa kwencwadi yezandla kungenzekanga ngesikhathi esinqunyelwe.
Leli su lingacubungula emabhulokheni amaflethi lapho ifulethi ngalinye lilinganiselwe imizuzu engama-60 yokulwa nomlilo. Kungase futhi kucabange ukuthi ezibhedlela, noma amakhaya asebekhulile babeyiziguli ezixhunywe ngemishini esekela impilo futhi azikwazi ukuhamba. Umqondo uvumela abahlali ukuthi bahlale babeke futhi uzonikeza insiza yomlilo ukucisha umlilo ezakhiweni noma ezindaweni zokusebenza. Uma umlilo usasazeka futhi ungalawulwa, bazobe sebesusa ukuphuma ngokuphelele. Endabeni yeziguli ezixhume imishini esekela impilo lapho-ke isinqumo kuyodingeka senziwe ukuthi iyiphi indlela noma iyiphi inketho noma enhle noma enhle, ukuhlala noma ukuhambisa, noma ngabe ikuphi, isiguli singaba sengozini enkulu.
Kufanele uhlele kuphela ukusebenzisa emuva noma ukuvikela endaweni noma ngezinhlelo zokuphuma endaweni noma ngezinhlelo, noma uhlelo lwe-alamu yabasebenzi uma ufune izeluleko zomuntu onekhono noma onekhono nezinsizakalo zomlilo nezokuhlangula. Isenzo sokuthola umlilo:
Ekutholeni noma ekuboneni umlilo noma ukukhanya, wonke umuntu kufanele azwakale ngokushesha nge-alamu yomlilo eseduze noma eseduze. Uhlelo kufanele lubandakanye indlela yokukhulisa i-alamu noma amasiginali uma kwenzeka umlilo.
Isenzo Ngokuzwa i-alamu yoMlilo
Uhlelo kufanele luqondise bonke abasebenzi noma isisebenzi lapho luzwa i-alamu yomlilo ukuthi isebenze noma isebenze kucebo noma inqubomgomo evunyelweyo ye-FEEP
Uma uhlelo lomphathi womlilo lusebenza, lapho bethola noma bezwa i-alamu, kufanele bathuthukele ezikhundleni ezinqunyelwe ukusiza amalungu omphakathi nabasebenzi ukuphuma esakhiweni ngendlela ephephile eseduze.
Izibani kanye neziphuphutheki ezindebezi akufanele zisetshenziswe ngenxa yokwehluleka kukagesi okungenzeka ngaphandle kokuthi ziyingxenye yoHlelo Lokuphuma Lokuphuthumayo Oluzimele.
Abasebenzi akufanele baphinde bangene esakhiweni ngaphandle kweThimba Lomlilo.
Ukubiza i-Fire Brigade
Abakwa-Fire Service kufanele futhi baziswe ngokushesha, kungaba nge-switchboard opharetha noma umuntu othola umlilo, ngokuya ngemibandela.
Isikhathi Somsebenzi - Isishintshi se-switchchboard ukuze sikwazi ukuxoxa ngohlelo lokufuduka oluphuthumayo, kufanele futhi siqinisekise ukuthi izandiso ezidingekayo zivulwa lapho switchboard inganakiwe.
Ezinye i-Times - Remainder of Staff (Abahlanza, abanakekeli njll.) Futhi ukuthi baxoxe ngale ndlela noma inqubo. Kunoma yikuphi, isiphathimandla esiphakeme kufanele siqinisekise ukuthi kubizwa umlilo ngeNkonzo yoMlilo lapho kuqubuka umlilo.
Amandla / Ukuhlukaniswa Kwenqubo
Vala Inqubo Engezansi - Yamukela inqubo yakho ethi 'Vala Phansi' njengoba kufanele
Ukukhonjwa Kwezindlela Zokweqa Ezikhiye
Emagcekeni noma ezindaweni zokusebenzela, lapho amalungu omphakathi nabantu abangajwayelekile ngokwakhiwa kwalezi zindawo, kufanele kube khona abalamuli abazokwazi ukubona izindlela eziphambili zokuphunyula zabasebenzi noma zabasebenzi. Zingahlanganisa imidwebo enobuqili futhi okubaluleke kakhulu ukuphunyula okuphuthumayo kanye nezimpawu zokuphuma.
Esedlule: i-luminescent stair noses ekhanyayo yesitebhisi handrail
Imichilo yeLuminescent Antislip
i-luminescent stair noses ekhanyayo yesitebhisi handrail
Umucu owenziwe ngokwezifiso we-luminescent anti slip
I-Luminous Stair Nosing